Blog Blog nke Tagged Indian "njem na Ebe" - THE INDIAN FACE
Iji efe na bọlbụ jupụta agwaetiti Mallorca
Lyinggbanye elu na Mallorca na balloon ikuku na-ekpo ọkụ abụrụla ihe ọdịnala n'agwaetiti Balearic Spanish. Ahụmịhe dum nke na-ewe ọtụtụ puku ndị njem ka ha nụrụ ụtọ elu igwe nke na-efefe n’elu ụwa na njem a dị ebube.
A kọwara obodo a nke nwere oke osimiri n'akụkụ obodo Baltic dị ka nke dị nwayọ juputara na ihe omuma. Ebe etiti na nkuku nile nke Helsinki na-akpali akụkọ ihe mere eme, ịba ọgaranya na ụkpụrụ ụlọ, nke na-akpali mmasị ndị njem nleta ọ bụla
Na-arị ugwu Yosemite
Lọ ịrị elu - sitere na ahụmịhe na aha ọma - maara nke a nke ọma… ịrị na Yosemite dị ịtụnanya! Nke a ebe A na-ewere ya dị ka ihe meka maka ugwu ndị ịrị elu ụwa, ọ bụkwa nnukwu ihe ịma aka ọtụtụ mmadụ ikpebi itinye mgbidi nke ogige a dị na Californian na ngalaba ha.
Paragliding na Pokhara: efe efe n’elu Central Nepal
Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ịgbachapụ ụzọ, Pokhara bụ otu n'ime ntụpọ kachasị mma iji mee ya. Obodo a, akpọrọ "ọnụ ụzọ Annapurnas" (ụzọ a ma ama site na Himalayas), dị n'agwaetiti Lake Phewa dị na etiti Nepal, ebe ịdị nso nke Sarangkot na ịdị elu ya na ọdọ mmiri ahụ. mee ya ka ọ bụrụ ebe dị mma maka mbido.
Njem iji gaa Brisbane na Australia
Ahụmịhe Australia niile ị na-agaghị agbaghara! Ọ bụrụ n’ịgabeghị isi obodo steeti Queensland na Australia, nke a bụ oge dị mma iji tinye ya na listi njem gị na-abịanụ. Dị na mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ, kilomita 920 site na Sydney anyị hụrụ Brisbane
Angkor Wat na ụlọ arụsị Cambodia furu efu
Angkor Wat na ụlọ arụsị nke Cambodia furu efu: Chọpụta ihe owuwu Hindu mara mma nke Alaeze Ukwu Khmer. May nwere ike icheta temple nile ndị rụrụ ọrụ dị ka ntọala dị na ihe nkiri ahụ 'Lara Croft: Tomb Raider' ma ọ bụ 'Na Mood For Love'
Kigba efe na Colorado: nyocha nke oge kacha mma
Mgbe anyị chere maka ịwụfụ Colorado bụ ihe mbụ na-agbata n’uche ... Ma n’ogodi? O kwere omume ịghara isoro onye ọzọ! Ugwu ya juputara na ebe anwududu na uda okike dika o bu ndi emere ndi ohuru na ndi egwuregwu snow ndi ozo ka ha na emeghari na ha.
Mmetụta adrenaline na ikuku dị mma mgbe ịwụnye na Colorado enweghị atụ, n'ihi na eziokwu bụ na ịga elekere ya kachasị elu, nke kachasị elu n'Ugwu Rocky, na-eti mkpu na-akpali akpali nke ndị skier ọ bụla kwesịrị ịbụ akụkụ nke.
Ebe kachasị dị egwu iji nọrọ na njedebe nke afọ a
En The Indian Face anyị bụ ndị na-eme nchọpụta, dịkwa ka anyị na-eche mgbe niile na ụbọchị nke ọ bụla bụ ohere iji chọpụta ebe ndị dị ịtụnanya, yabụ anyị chọrọ igosi gị ụfọdụ n'ime ebe ịtụnanya kachasị banye na 2018 ibi ndụ na njem.
Patagonia site na igwe kwụ otu ebe: njem dị egwu
Oké ifufe siri ike, anyanwụ nke na-efe efe, na mbara ala jupụtara, na-eme njem njem njem na Patagonia bụrụ njem siri ike ma na-achọsi ike. N’agbanyeghi ihe nile, udu ala na mmetuta nke enwere ike ihu na amata n’ebe ahu n’eme oge ndia nile di ilu nwere ike ibu nke uto
Skate na Lanzarote: agwaetiti gafere skate
Lanzarote bụ agwaetiti a ma ama maka ikike ya nwere ịme Surf n'ụsọ mmiri ya. Mana ọ dịkwa ebe ị nwere ike iwepụta skateboarding aghụghọ na okike gị. Ihe bụ na taa anyị na-ewetara gị vidiyo anyị ga-egosi gị ihe ị ga-enweta… […]
Uzo riri oke: Holmenkollen sicha oso
Airbnb juru onye ọ bụla nwere ụlọ nnabata anya dị egwu: akụkọ ifo Holmenkollen sicha na-awụlikwa elu. Ulo oru a di ka ski ski maka egwuru-egwu 1952 nke Oslo.
Thezọ kachasị mma maka ịgba ski na snowboarding freeride na Andorra
Kpamkpam snow na-amaghị nwoke, ihe mgbochi na-atụghị anya ya, jumps dị ịtụnanya, mkpọda ugwu vertigo na ebe nwere oke osisi. Ọ bụrụ na ị nwere oke egwu banyere egwuregwu na egwu dị egwu, Grandvalira na Vallnord sọọsụ na-etinye ebe dị iche iche maka iji zụta Andorra na mkpịsị aka gị.
Kachasị mma nwere ike iji ụgbọ mmiri sọks na Europe
Kachasị mma snowboard mgbochi na Europe Taa, anyị na-ewetara gị ndepụta nke snowparks kachasị mma iji mee ihe nkiri snow na mpaghara Europe. Ọ bụghị ọkwa, ọ bụ ndepụta ... anyị na-anabata aro. Ọ bụrụ na ị maara snowpark na Europe, nke dị nso na Spain
Andalucía Bike Race: kilomita 422 na steeti iri na ise
Andalucía Bike Race: 422 kilomita ascent na 15 nke 22 Na February XNUMX, nkeji nke ise nke Andalucía Bike Race ga-amalite, nke ga-amalite site na obodo Jaén na nke pụtara nnukwu ọdịiche dị na akụkọ ntolite maka ndị sonyere ya.